12 Abaculi abadumileyo kwizinto ezizithethayo kubo
12 Abaculi abadumileyo bavakalisa ukuba yibuphi ubugcisa kunye noko kuthetha ntoni kubo
Hlola ubomi ngokusebenzisa ubugcisa kunye nezi ngcaphuno ezidumileyo
Ngomculi, umgca unomlomo. Umculi uthetha kuwe ngemibala ephazamisayo, izibetho ezinesibindi, kunye nemigca emihle. Uxela imfihlelo yakhe, ulwabelana naye ngentshiseko, ubonisa ukukhathazeka kwakhe, kwaye uhlambalaza iinjongo zakho. Ngaba ulungele ukuva ulwimi lobugcisa ?
Ubugcisa bukhuthaza abantu. Cinga ngemisebenzi kaMichelangelo, uPicasso okanye uLeonardo da Vinci. Abantu baxakeke kwiimyuziyam ukuze bazuze umsebenzi wabo. Imizobo yabo, imibala kunye nemizobo yimiba enomdla omkhulu.
Laba baphandi abakhulu baphila iminyaka emininzi edlulileyo, kodwa umsebenzi wabo uyaqhubeka ukukhuthaza izizukulwana ezitsha zabaculi.
Abaculi abaDumileyo ngokubhekisela kobugcisa
Nazi izicatshulwa zobugcisa ezivela kubaculi abadumileyo abayi-12. Amazwi abo avuselela ukutsha kwamandla. Ziyanxusa ukuba uphefumulelwe ukuba uthathe ibrashi yakho yokupenda kunye nepalethi.
Umculi wase-Australia wase-Australian avant-Garde uBrett Whiteley uyaqhubeka nokukhuthaza ubugcisa beengcali kunye nabantu abaqhelekileyo, kwihlabathi. Wawunqoba umvuzo owawuhlonishwa kakhulu e-Australia, u-Archibald, uWynne noSulman, kabini. U-Whiteley wadala ubugcisa bakhe e-Italy, eNgilandi, eFiji nase-US.
"Ubugcisa bufanele bumangalise, buyise, i-transfix. Omnye kufuneka asebenze kwizicubu phakathi kwe nyaniso kunye neparanoia."
Umdwebi we-American realist nomshicileli u-Edward Hopper wayedume ngokuba nemifanekiso yeoli, kodwa wenza uphawu lwakhe njengama-watercolorist kunye neerchchings. Ubomi baseMerika rhoqo kunye nabantu babenemibhobho yeHoperper.
"Ukuba ndiyakwazi ukuthetha ngamazwi, bekungekho sizathu sokupenda."
Umdwebi ongumfuziselo wase-Ireland-waseBrithani uFrancis Bacon uyaziwa ngokunyalibala kobugcisa bakhe. Imifanekiso awayeyisebenzisileyo yayiyinto ebomvu kwaye idonsa. Uyaziwa kakhulu ngemisebenzi yakhe, Izifundo ezintathu zokuBaliswa kwiSiseko soMnqamlezo (1944), Study for Self-Portrait (1982) kunye noFundo lwe-Self Portrait-Triptych (1985-86).
"Umsebenzi womculi uhlala uqinisa imfihlelo."
"I-Picasso yeso sizathu sokuba ndiyipende. Nguye ubaba, owamnika unqwenela ukupenda."
Omnye wabathengi abaziwayo kakhulu kunye nabaculi abavela kwi- Renaissance age , uMichelangelo, kunye nemisebenzi yakhe yenze ubugcisa bentshona. Umdwebi waseTaliyane, umdwebi, umlobi, umakhi wezakhiwo kunye neenjineli udume ngokupenda izibhengezo ezivela kwiGenesis kwiplani kwaye ibonisa isigwebo sokugqibela eludongeni lweSistine Chapel eRoma. Kwakhona wayengumakhi weSt. Peter's Basilica.
"Ukuba abantu babesazi indlela enzima ngayo ukusebenza ukuze ndiphumelele, kwakungeke kubonakale kumnandi kakhulu."
Umculi waseSpeyin uPablo Picasso ungomnye wabalingcali abanamandla kunkulungwane ye-20. Usebenzisana novulindlela weCubist kwaye uyaziwa kakhulu ngemisebenzi efana neproto-Cubist Les Demoiselles d'Avignon (1907), kunye noGuernica (1937).
"Njengomntwana, ndifana noRafael kodwa kuye kwandithatha ixesha lokuba ndibe ngumntwana."
"Ubugcisa buhlamba kude nomoya uthuli lobomi bemihla ngemihla."
"Wonke umntwana ngumculi. Ingxaki yindlela yokuhlala ngumculi xa ekhula."
Umdwebi waseScotland uPaul Gardner uthanda iindibano zeYurophu kunye neScotland ngokubugcisa.
UbuBuddha kunye nefilosofi yasempuma ziye zaye zithonya elikhulu.
"Umzobo awusoze wugqiba - umane uvele kwindawo ezithakazelisayo."
Umculi weFrench Post-impressionist uPaul Gauguin wamukelwa ngokwenene kuphela emva kwexesha. Isitayela sakhe sokuzama imibala kwamenza wema ngaphandle kwe-Impressionists. UGauguin wayeyilungu elibalulekileyo le-Symbolist movement, kwaye yabangela ukudala isitayela seSynthetist, i-Primitivism, kwaye ubuyela kwiindlela zokuziphatha.
"Ndivala amehlo ukuze ndibone."
UWilliam Wolf ungumculi waseMerika kunye nomhleli we-freelance. Uye wahlela iincwadi ezininzi kwipeyinti efana neKey Painting: I-Fur kunye neentsiba , iMfihlelo ye-Watercolor , izibonda ze-Genius: I-Best of Drawing , phakathi kwabanye.
"Umbala uyamnandi, umbala ungumbala obala, isidlo esisisigxina sehlo, ifestile yomphefumlo."
Umculi waseMerika uFrank Zappa wenza umculo kumashumi amathathu eminyaka. Udlale idwala, i-jazz, kunye nezinye iindidi zomculo ngeli xesha ehambisa iifilimu kunye namavidiyo omculo. I-Zappa yafakwa kunye ne-Grammy Lifetime Achievement Award ngo-1997.
"Ubugcisa benza into ngaphandle kokuyithengisa."
Umdwebi waseBrithani owawuzalwa waseBrithani uLucian Freud wayebhiyozelwa ngenxa ye-impasto portrait kunye nemifanekiso yokudweba. Ubugcisa bakhe bunengqondo yengqondo kwaye kaninzi luhlola ukuxhamla okungahambi kakuhle phakathi komculi kunye nomzekelo.
"Xa ubude ukhangele into ethile, into engabonakaliyo iya kuba, kwaye, ngokumangalisayo kukuba, okwenene."
UPaul Cezanne wayengumculi waseFrentshi kunye nomdwebi we-Impressionist. UPaul Cezanne unoxanduva lokubonelela unxibelelwano phakathi kwekhulu le-19 Inkcazo, kunye ne-20 yeCubism yenkulungwane. I-Cezanne yamthabatha inyaniso yokuba nakuba abagxeki bamxhaphaza, abaculi abancinci bamhlonela ngexesha lokuphila kwakhe.
"Kunengcamango yemibala, kwaye yile nto yedwa, kwaye ingekho ngengcamango yengqondo, ukuba umdwebi ufanele uhambelane."
Umculi waseFransi uRobert Delaunay waqalisa ukunyakaza kobuhlanga kunye nomkakhe, uSonia. Ubugcisa bakhe basebenzise imilo ehambelanayo, kwaye ebomini ubomi babonakala bengabonakali .
"Ukudweba ngokwemvelo ulwimi olukhanyayo."
I-Catcher kwi-Quotes ye-Rye kunye nesigama
'I-Tender yi-Quotes Night'
Amazwi Okugqibela aMazwi: Abalinganiswa beFictional, Amabhuku kunye neMidlalo
'Iingxelo zeBell Jar'
Ezi zi-20 zeeNcwadi eziLwazi eziZaziwayo ziya kukwenza ube neqhayiya ngabantu bakho
Iingcaphulo zokuzalwa ezingama-50
Ngokuphathelele kwiSebe leSebe lase-US
Udlala njani umdlalo weGalofu obizwa nge 'Las Vegas'
Tennessee Vital Records - Ukuzalwa, Ukufa kunye neMitshato
I-Brown Marmorated Stink Bug (i-Halyomorpha halys)
Paris, iTransfer Prince
Imbali noMoya wePaak Race Race
Ukucinga kunye nokudala
Iikholeji neeYunivesithi kunye neeNkqubo zoBuchule boBuchule boBuchule